han zaw's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (3)Discussions (2)EventsGroups (2) han zaw's Likes Han zaw's Friends
View All han zaw's Groups
han zaw has not received any gifts yet
han zaw's Page
han zaw is now friends with SuWai, wai phyo thu, Aung Thet Oo and K3lvin moreJul 30, 2011U Tin Nyunt and han zaw are now friendsFeb 1, 2011han zaw postedablog postသူ​တို့​ပြော​တဲ့ - ဖွင့်​ထား​သော​ရင်း​မြစ် Open SourceOpen Source ကို ပွင့်လင်း​ရင်း​မြစ်၊ ဖွင့်​ထား​သော​ရင်း​မြစ်​လို့ မြန်မာဘာသာ​ပြန် ထား​တာ​ကို မှတ်သား​ဖူး​ပါ​တယ်။ ''Open Source ကို အခ​မဲ့​လို့ အဓိပ္ပါယ်​ပြန်​ရင် မဟုတ်​သေး​ဘူး။ အခ​မဲ့​လို့​ပြော​ရုံ​နဲ့ မ​လုံလောက်​ဖူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။ ကျွန်တော်​က Software တစ်​ခု​ကို ရေး​တယ်။ သူ့​သ​ဘာ​ဝ​အရ Bug ရှိ​တယ်။ Software က ကြီး​လာ​ရင် ဒီ Bug ကို ကျွန်တော်​တစ်​ယောက်​ထဲ စုံလင်​အောင် Fit မ​လုပ်​နိုင်​ဘူး။ Open Source က အဲ​ဒီ​လို​မဟုတ်​ဘူး။ လူ​တိုင်း​က Bug တွေ​ကို လိုက်​ရှင်း​နိုင်​တယ်။ အဲ​ဒီ​အခါ​မှာ Software ရဲ့…See MoreJan 30, 2011 0
han zaw updated their profileJan 26, 2011မြတ်သွင် commented on han zaw's blog post မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ"@Tun ကိုထွန်းမေးတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယား or ဝီကီပီးဒီးယ လားဆိုတာ.. ဝီကီပီးဒီးယားပါ။ ဝီကီအစည်းအဝေးမှာ ပီဒိယတွေ၊ ပီဒီယားတွေ၊ ပီးဒီးယားတွေက တခါ ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ ဗ​ဟို​စာ​မျက်​နှာ​ ကို အပ်ဒိတ် လုပ်ဖို့က ဝီကီဖေါင်ဒေးရှင်းရဲ့ တာဝန်ပါ။ ကျွန်တော်တို့…"Jan 26, 2011မြတ်သွင် commented on han zaw's blog post မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ"(တယောက်ထဲရေးလို့ တက်လာတဲ့ အကြောင်းအရာ ၁ သောင်းမမြင်ချင်ဘူး၊ အယောက် ၁ဝဝ ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာ ၁ဝဝဝ ကပိုတန်ဖိုးရှိတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို wiki မို့ပါ။ ) ကိုမြင့်ကျော်သူ ပြောတာ ကြိုက်ပါတယ်...။ reference ပါတဲ့ အကြောင်းအရာကို အဓိကထားပြီး ကျွန်တော်တို့ တင်ပါတယ်..။…"Jan 26, 2011Myint Kyaw Thu commented on han zaw's blog post မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ"@Ko Lionslayer, why are you so defensive of wiki writing? Let forget wiki and just say, I write something I don't really know on MITP (ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းနဲ့ dict အားကိုးနဲ့ ဆော်ထည့်လိုက်တယ်). Will you accept this? Did I do the right thing? Is this…"Jan 26, 2011Tun commented on han zaw's blog post မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ"a little off-topic.
Inascholarly written research papers, we cannot give citation to any wiki contents. We can only cite the original publication. The reason is that wiki contents are open but not authoritative, although some wiki contents with…"Jan 26, 2011 More... RSS
Freelance (The Ray of Light Journal, Personal Computer Magazine, Teen Magazine, Global English Magazine, Shu Ma Nyee Magazine and Other Publication House)
BA(Psychology), Dip CA
Han zaw's Blog
သူ​တို့​ပြော​တဲ့ - ဖွင့်​ထား​သော​ရင်း​မြစ် Open Source
Posted on January 30, 2011 at 4:24pm0Comments
Open Source ကို ပွင့်လင်း​ရင်း​မြစ်၊ ဖွင့်​ထား​သော​ရင်း​မြစ်​လို့ မြန်မာဘာသာ​ပြန် ထား​တာ​ကို မှတ်သား​ဖူး​ပါ​တယ်။ ''Open Source ကို အခ​မဲ့​လို့ အဓိပ္ပါယ်​ပြန်​ရင် မဟုတ်​သေး​ဘူး။ အခ​မဲ့​လို့​ပြော​ရုံ​နဲ့ မ​လုံလောက်​ဖူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။ ကျွန်တော်​က Software တစ်​ခု​ကို ရေး​တယ်။ သူ့​သ​ဘာ​ဝ​အရ Bug ရှိ​တယ်။ Software က ကြီး​လာ​ရင် ဒီ Bug ကို ကျွန်တော်​တစ်​ယောက်​ထဲ စုံလင်​အောင် Fit မ​လုပ်​နိုင်​ဘူး။ Open Source က အဲ​ဒီ​လို​မဟုတ်​ဘူး။ လူ​တိုင်း​က Bug တွေ​ကို လိုက်​ရှင်း​နိုင်​တယ်။ အဲ​ဒီ​အခါ​မှာ Software ရဲ့… Continue မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ
Posted on January 25, 2011 at 3:27pm 20 Comments
my.wikipedia.org ကို အား​သွန်း​ခွန်​စိုက်​ရေးသား​နေ​တဲ့ ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​ရေးသား​သူ (Wikipedian)တွေ အများ​ကြီး​ရှိ​ပါ​တယ်။ သူ​တို့​ဟာ ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​မှာ အခု​လို​အား သွန်​ခွန်​စိုက်​ရေးသား​နေ​တယ်​ဆို​တာ​က​လည်း သူ​တို့​အတွက် ဝီ​ကီ​က​နေ စီးပွား​ရေး​အရ အကျိုး​အမြတ်​တစ်​စုံ​တ​ရာ ရ​ရှိ​နေ​လို့ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ အချိန်​တွေ​များ​စွာ ပေါများ​နေ​လို့ မဟုတ်​သ​လို ရေးသား​သူ​တစ်​ချို့​ဟာ အိုင်​စီ​တီ​အသိုင်း​အဝန်း​ထဲ​က မဟုတ်​ပဲ၊ ကိုယ့်​ရဲ့ စိတ်ဝင်စား​မှု​နဲ့​ဝါသနာ​အရ ရေး​နေ​ကြ​တယ်​ဆို​တာ​ကို တွေ့​ရ… Continue ယွန်း​ချို​ဖောင့် ရေး​သူ စိုင်း​ဇင်ဒီဒီဇုံ
Posted on January 20, 2011 at 1:28pm4Comments
ယွန်း​ချို​လို့ အမည်ပေး​ထား​ပြီး ယူ​နီ​ကုတ် စံ​နှုန်း​အတိုင်း အတိ​အကျ​လိုက်နာ​ထားတဲ့ ဖောင့်​ရေးသား​ခဲ့​သူ စိုင်း​ဇင်​ဒီ⁠ဒီ​ဇုံနဲ့ တွေ့​ဆုံ​ဖြစ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ယူ​နီ​ကုတ် စံ​နှုန်း​အတိုင်း အတိ​အကျ​လိုက်နာ​ထား​တဲ့ ဖောင့်​ရေး​ဖြစ်​ခဲ့​တာ​နဲ့​ပတ်သက်​ပြီး မေးမြန်း​ခဲ့တဲ့​အချက်​များ​ထဲ​မှ စိုင်း​ဇင်​ဒီ⁠ဒီ​ဇုံ ရဲ့ ဖြေ​ကြား​ချက်​များ​ကို တင်ပြ​လိုက်​ပါ​တယ်။မိ​ခင်​ဘာသာ​စကား​နဲ့ ကွန်ပျူတာ​သုံး​ချင်​တယ်ယူ​နီ​ကုတ်​ဖောင့်​အနေ​နဲ့ Myanmar1 ထွက်​လာ​တဲ့​အချိန်​မှာ… Continue AddaBlog Post
ml updated their profile21 hours agomanawphyulay leftacomment for Aung Kyaw HtinSaturdaymanawphyulay leftacomment for Ko ChitSaturdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsSaturdaydevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Dec 4peepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Dec 3Nga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Dec 3LIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Nov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26 More... RSS